Sideed maleeshiyo Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqeymo Mareykanku ka fuliyay Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSideed maleeshiyo Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqeymo Mareykanku ka fuliyay Soomaaliya
April 6, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sideed maleeshiyo Al-Shabaab ah ayaa lagu dilay duqeymo uu Mareykanku ka fuliyay gudaha Soomaaliya.
Duqeymaha oo ahaa saddex ayaa ka dhacay deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose Axadii, sida ay war-saxaafadeed ku sheegeen Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) maanta oo Isniin ah.
“Qiimaynta hordhaca ah ee taliska sameeyeen ayaa sheegaysa in duqeymahaan lagu dilay sideed argagixiso ah,” War-saxaafadeed ayaa sidaa lagu yiri.
Duqeyn kale oo Jimcadii ka dhacday koonfurta Soomaaliya ayaa lagu dilay shan dagaalyahan oo katirsanaa Al-Shabaab, sida ay sheegeen AFRICOM.
Mareykanka ayaa sanadihii u dambeeyay kordhiyay duqeymaha ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan gudaha Soomaaliya.
Sanadkan 2020 ilaa 34 duqeymood ayaa milatariga Mareykanku ka fuliyay gudaha Soomaaliya.
April 7, 2020 Sargaal sare oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn Mareykanku ka fuliyay Soomaaliya
Kuala Lumpur.-(Puntland Mirror) Walaalka dhanka aabaha ee hoggaamiyaha dalka Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un ayaa lagu dilay gudaha caasimada dalka Malaysia ee Kuala Lumpur, sida ay sheegayaan ilo-wareedyadu. Booliiska Malaysia ayaa sheegay in nin Kuuriyaan ah [...]